Baarlamaanka Puntland oo turxaan bixin ku sameeyey siyaasadda qoyska. – Radio Daljir
Baarlamaanka Puntland oo turxaan bixin ku sameeyey siyaasadda qoyska.
Garoowe, May, 04 – Golaha baarlamaanka Puntland ayaa maanta tafatir ku sameeyey siyaasadda qoyska iyo qaybaha ay dumarku ku leeyihiin shaqooyinka iyo wax soo saarka dalka, Sidaas waxaa maanta (Arbaca) war baahinta u sheegay Gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka Puntland Salaad Xareed Cali.
Gudoomiye ku xigeenka oo maanta ka hadlay kulan muddo sedex maalmood ah ka soconayey. Wasaaradda horumarinta haweenka iyo arimaha qoyska puntland xarunteeda magaalada Garoowe. ayaa sheegay in golaha wakiilada Puntland ay kulankaas ku tur xaanbixiyeen siyaasadda qoyska. Isla markaana ay isugu yimaadeen ilaa sodon (30) xubnood oo ka tirsan golaha wakiilada dawladda Puntland.
Wasiir ku xigeenadda wasaarada horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland. Marwo Seynab Ugaas Yaasin oo iyana kulan kaas kasoo qayb gashay ayaa sheegtay in haweenka Soomaaliyeed ay mar kasta la kulmaan xaqiraado kala duwan sida shaqooyinka iyo siyaasadda oo lagu xaqiro. Sidoo kale waxa ay muujisey doorka ay haweenku ku leeyihiinka wax soo saarka dalka.
Siyaasadda qoyska oo maanta ay turxaan bixiyeen golaha wakiilada dawladda Puntland. Ayaa kusoo beegmeysa xilli muddo labaatan( 20) sano ah ay dalka Soomaaliya ka jireen dagaallo sokeeyey. Kuwaas oo sababay in ragga intooda badan aysan qaban wax shaqo ah. Balse ay bedelkooda galeen haweenka oo noqdey kuwo u xamaasha qoyskooda.
Cabdi Xassan Rooble ?Awoowe?